E-News Nepali || Fast and Accuracy » ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भनेपछि पत्रकार संग पर्यो चर्काचर्की, रामकुमारी झाँक्रीको झाँको झारे (भिडियोसहित)
शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलोचना गर्न पछि परेनन् । उनले यो देशमा ओली प्रधानमन्त्री भएर के गरे भन्ने प्रश्न गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री ओली भएर देश र जनताकोलागी के भएको छ ? शेर बहादुर प्रधानमन्त्री भएर के भयो ? प्रचण्डको त कुरै नगरौं । यो देश अहिले केवल ओलीमय र प्रचण्डमय बनेको छ ।’ शाहीले योभन्दा अगाडी पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै आईरहेका थिए । उनले वर्तमानदेखि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतले यो देशकोलागी केही नगरेको बताए ।भिडियोसहित
प्रकाशित मिति ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:१०